I-Motocross tattoos kubathandi balo mdlalo: imibono kunye neentsingiselo | Ukwenza umvambo
I-Motocross tattoos isekelwe kumdlalo omncinci owaziwayo kwihlabathi liphela, kodwa idume kakhulu kumzantsi weYurophu kunye ne-United Kingdom (okwenene apho ivela khona), kunye neyiphi i-protagonists yayo eya kuba yizithuthuthu, iisuti eziqinileyo kunye nodaka oluqhelekileyo ukufumana kwindlela.
Nangona i-motocross tattoos ingenayo intsingiselo ekhethekileyo, iseyeyona ndlela ilungileyo yokubonisa uthando lwakho kulo mdlalo unzima.Ngoko ke, ngaphezu kokuthetha ngokufutshane ngembali yayo, siya kukunika iingcamango ezininzi ukuze ufumane uyilo olulungele wena kunye nobuntu bakho. Kwaye ukuba ufuna ngakumbi, jonga kweli nqaku elinye malunga tattoos yesithuthuthu, kubathandi bamavili amabini!
2 Iimbono ze-Motocross tattoo
2.1 Iibhayisekile zeMotocross
2.2 Abaqhubi beenqwelomoya abadumileyo
2.4 Imiboniso yempembelelo
2.5 Iitattoos zeMotocross ngentliziyo
2.6 Tattoo yombhobho
2.7 Uyilo lombala olonwabisayo
3 Ungalithatha njani ithuba le tattoos zemotocross?
4 Iifoto ze tattoo zeMotocross
Motocross, njengoko besitshilo, yavela eUnited Kingdom, apho ugqatso lokuqala lwaqala ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX. Ezi zaziquka ukufikelela usukelo kuqala, kodwa emva kokuphumelela uthotho lweemvavanyo, ngoko kukho ulungelelwano phakathi kobuchule bokuzoyisa nokufikelela usukelo kuqala. Igama elithi motocross ngumxube phakathi kwesithuthuthu, 'isithuthuthu' kunye nelizwe elinqumlayo, 'ukhenketho'.
Umdlalo wawunogqabhuko-dubulo lokuqala lokuthandwa kwi-30s, xa waqala ukuthatha i-UK ngeqhwithi. Iibhayisikili ze-Motocross emva koko zahluke kakhulu kwiibhayisikili zesitalato kwaye ngokwenene bebengoovulindlela ekubandakanyeni imiba ethile ngaphambi kwale yokugqibela, njengokunqunyanyiswa. Kwaye okumangalisayo kukuba, nangona ingumdlalo odumileyo eYurophu, kuyo yonke iminyaka ye-70s kunye ne-90s abavelisi abaphezulu bezithuthuthu zesi simbo yayingamaJapan afana neHonda okanye iSuzuki.
Okwangoku, I-motocross ngumdlalo othandwa kakhulu onokhuphiswano olwahlukileyo, kunye neentlobo ezahlukeneyo, ezifana neFreestyle okanye iSuperMoto, kwaye oko kuye kwavela kwezinye iindlela zokuzonwabisa kulo mdlalo, njengakwiipalions ezivaliweyo.
Iimbono ze-Motocross tattoo
Okulandelayo siza kukunika Uninzi lweembono zakho zokuba ufumane i-tattoo yakho efanelekileyo ye-motocross kwaye ungabonisa uthando lwakho kulo mdlalo ngalo lonke ibhongo lakho.
Kwindawo yokuqala, kwaye njengoko kubonakala, i-motocross tattoos inokumkanikazi omkhulu, isithuthuthu, ekubeni ngaphandle kwayo le midlalo ayinakwenzeka. Njengomvambo, sinezinto ezininzi ezinokwenzeka, njengoko zininzi njengemodeli okanye ukuba nazo. Ukuba ufuna ukunika ukubaluleka kwimodeli, unokukhetha ukuyila okuneenkcukacha ngokusemandleni.
Abaqhubi beenqwelomoya abadumileyo
Kwezemidlalo kukho amaxesha akwenza ube namaqhuma, kunye nabantu abakunika ukonwaba. Amagorha ale mihla, ayoyisa yonke imiqobo ukuze abe ngookumkani bemidlalo yawo, ekhuthaza ukunconywa kuyo yonke indawo. Kungenxa yoko le nto ii-tattoos zomqhubi zithandwa kakhulu. Ukuthatha ithuba kubo, jonga zonke iinkcukacha ezinokuchonga isithixo sakho, kungekuphela nje isithuthuthu, kodwa kunye ne-jumpsuit, isigcina-ntloko, ezinye ii-acrobatics ...
Enye yezona zinto zibalaseleyo kulo mdlalo sisigcina-ntloko, yiyo loo nto zikwayenye yezona zinto zikhuthazayo kwi tattoos ze-motocross. Uyilo lunokuba lula, nokubamba kwendabuko, kunye nemigca eshinyeneyo okanye ngombala. Kwelinye icala, ikwangumbono olungileyo ukukhetha uyilo oluyinyani, apho unokuphinda ubonise indawo yesiganeko kwiglasi yevisor.
Kwaye sithetha ngemiboniso, Zezinye zezona zinto zixhaphakileyo zokutsala inkuthazo kwii tattoos ze-motocross. Kule meko, uyilo oluyinyani luhlala lukhethwa rhoqo, lucacisiwe ngokusemandleni, kwaye kumnyama nomhlophe ukunika umdlalo wedrama. Uhlobo lwemiboniso inokubonisa eyona nto uyithanda kakhulu ngalo mdlalo unika umdla nge-pirouette yesitayile esikhululekileyo okanye into apho umlinganiswa oyintloko ekuzo zombini isithuthuthu kunye nelizwe elinzima nelinzima.
Iitattoos zeMotocross ngentliziyo
Ngakolunye uhlangothi, Abo bakhetha i-tattoo yesitayela esilula abayi kuba nzima kakhulu ukufezekisa uyilo olupholileyo noluyingqondi.. Umzekelo, ungasebenzisa kuphela iprofayile yesithuthuthu ukutsiba ngentliziyo ngasemva (amanqaku amanqaku ukuba ibomvu okanye omnye umbala), okanye udibanise ne-EKG ukubonisa ukuba intliziyo yakho ibetha ngezinga le-accelerator.
Ngokuqinisekileyo yenye yezona tattoos zinomtsalane kunye nezantlandlolo ozibonileyo ixesha elide, kwaye ngaphezu kwako konke, ilungele abalandeli bezithuthuthu kunye ne-motocross. Kumalunga nokuzoba umcibisholo esandleni sokunene, i-accelerator, ehamba kunye ne-onomatopoeia yokukhawuleza. Ukuba ufuna ukuyenza ibe yeyakho ngakumbi, cela umzobi we tattoo ukuba enze utolo oluneenyawo eludakeni lwesithuthuthu osithandayo.
Uyilo lombala olonwabisayo
Ii tattoos ze-Motocross nazo zinokuba mnandi kwaye kungekhona nje ziyinyani kwaye zimnyama namhlophe.Ngokuchasene noko, ungakhetha uyilo oluqhelekileyo ngakumbi olukhangeleka lulungile. Isitayela sekhathuni, kulolu hlobo lwemeko, yinto ebonakala ngathi iyona nto ibhetele, ekubeni ivumela ukuba idibaniswe nemibala eqaqambileyo, kunye nesitayela somzobo esinamandla.
Ungalithatha njani ithuba le tattoos zemotocross?
Sele siyibonile loo nto Olu hlobo lwe tattoos lupholile kakhulu kwaye lufanelekile kwabo banomdla kulo mdlalo othakazelisayo. Nangona kunjalo, xa kuziwa ekutsaleni impembelelo kuyilo lokugqibela, sinokwenza kakuhle ukugcina oku kulandelayo engqondweni:
Kubalulekile ukwenza isigqibo kwangethuba ngesimbo esithile okanye esinye. Nangona kuqheleke kakhulu ukukhetha uyilo oluyinyani kwaye kumnyama nomhlophe ukubonisa imvakalelo kunye nobungozi balo mdlalo, sinokukhetha into eyahlukileyo kakhulu ukuba into esiyifunayo kukuqaqambisa ubumnandi esiziva ngamavili amabini.
Ngayiphi na imeko, Into ephambili kukuba ukhethe umzobi we tattoo oyingcali kwezi ntlobo zoyilo.Ngokukodwa ukuba siye sagqiba kwi-design yokwenene, ekubeni yonke into inokonakala ngokubulawa kakubi.
I-Motocross tattoos yinyani yexesha elidlulileyo, njengoko ukwazile ukubona kulo lonke eli nqaku. Sixelele, ingaba unayo itattoo ephefumlelwe ngulo mdlalo? Loluphi uhlobo? Kutheni ugqibe ekubeni uyenze?
Iifoto ze tattoo zeMotocross
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Izinto kunye neeTattoos zezinto » I-Motocross tattoos kubathandi balo mdlalo: iingcamango kunye neentsingiselo